Salaam Puntland Bank Boosaaso oo soo bandhigtay Adeeg loogu Magac Daray “KAAFTOON” – Puntland Voice
Salaam Puntland Bank Boosaaso oo soo bandhigtay Adeeg loogu Magac Daray “KAAFTOON”
August 1, 2011 12:01 pm Views: 131
Bosaaso(AB):-Salaam Puntland Bank ayaa maanta oo bishu tahay 30/7/2011. ku soo bandhigay magaalo madaxda ganacsiga ee puntland Adeeg cusub oo loogu magac-daray (KAAFTOON) oo isku xiri doona salaam puntland bank iyo adeegga SAHAL SERVICE oo ah adeeg ka mid ah adeegyada shirkadda Golis Telecom Somalia ay ku soo kordhisay deegaamada puntland taarikhdu markay ahayd 07/11/2009.
Waa adeeg aad uga kaaftoomeeyso inaad bankiga timaado adoo doonaya inaad lacag dhigato,ama ka qaadato.
Kaaftoon waa adeeg aad isticmaali kartid xiligada aan bangugu furnayn sida: jimcayaasha,ciidaha,duhurkii, iyo habeenkii.
Kaaftoon waxaad ku isticmaali kartaa meelkasta oo ay gaarto anteenada shirkadda Golis.
Kaaftoon wuxuu ganacsatadu u sahlayaa xisaab xiridda maalinkasta; waayo ganacsaduhu wixii maalinta oo dhan uu ku aruurinaayey sahalka ayuu marka uu shaqada dhameeyo hal mar ku shubayaa acoun-kiisa salaam .
Sidoo kale waxaa kalmado la mid ah ka soo jeediyey madashaa lagu soo bandhigay adeegga KAAFTOON mudanayaal ay ka mid yihiin: siyaasi Cali Cabdi Awaare,sh. Daahir Aw Cabdi,Dr.Axmed xaaji Cabdirixmaan,Ugaas xasan Ugaas Yaasiin.